Written by လင်းခါး Tuesday, 11 December 2012 21:48	“ဒါကြောင့် မင်းတို့ကို ငါပြော ပါတယ်” “ပြီးမှ ငါ ပြောပါ တယ်လာ လုပ်မနေနဲ့ သော်ဇင်ရာ” “မင်း ဖဲမကောင်းလို့ ရှမ်းကိုးမြီး ပြောင်းဆော့ ရအောင် ပြောတဲ့ အပင်က ငါပြောတာလေ မင်းတောင်မှ ဖဲရှုံးရတဲ့ အထဲ အာရုံမစား စမ်းနဲ့လို့ ပြောသေးတယ်”cialis 20mg buy cialis over the counterdiskon viagra online yangviagra viagra
argaiv1701cialis 20mg argaiv1563
Written by မိုးမိုးဝါ	Thursday, 25 October 2012 23:28	“ကိုရင်က မြို့ဦး ကျောင်း စာသင် တိုက္ဖ္ဖ္ဖ္ဖ္ဖကြီးကနော်” “ဟုတ်ပါတယ်။ ဒကာမလေး”
"ကိုရင့် အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ” “၁၆ နှစ်ပါ။ ဒကာမလေး” “ဟင်း၊ တပည့်တော်မလည်း ၁၆ နှစ်ပါပဲ”
Last Updated on Friday, 26 October 2012 19:27	သူချစ်ကိုယ်ချစ်
Written by ဇွဲလွင် Wednesday, 05 September 2012 14:05	“ကိုယ်ချစ်ကို မရှာနဲ့၊ သူချစ်ကို ရှာဟဲ့”တဲ့။အပျို စမဖြစ်ခင် ကလေးသာသာ အရွယ် ကတည်းက နွဲ့လေးဝေ တစ်ယောက် အပျိုလေး၊ အပျိုလတ်၊ အပျိုကြီးတို့ စုဝေး တိုင်ပင်ရာတွင် ကြားခဲ့ ရသည့် စကား။
Last Updated on Wednesday, 12 September 2012 16:42	ကွဲကြေသွားသော မနက်ဖြန်များ
Written by လင်းဝေအိမ်	Tuesday, 14 August 2012 15:47	သာမန် မနက်ခင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အရာ အားလုံးက သမားရိုးကျ ဖြတ်သန်း နေကြတဲ့ အဲဒီ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တစ်စုံတစ်ခု လိုအပ် နေခဲ့တယ်။
Written by ကချင်လေး၊ဆေး-မန်း၊ Thursday, 12 July 2012 15:29	“No man is an island” လူဆိုတာ ကျွန်းမဟုတ်၊ သီးခြားနေလို့ မရ၊ အသည်း မမာနိုင်တာမျိုးတဲ့။ မှန်တာပေါ့နော်။
Written by ကချင်လေး၊ဆေး-မန်း၊	Friday, 15 June 2012 16:38	အဆင့် ကြေညာတော့မှာမို့ ကြယ်ကလေး ရင်ခုန်နေသည်။ ပြိုင်ဘက် မိုးမြင့်မြတ်ကို တစ်ချက် လှမ်းကြည့်မိတော့ ပိုလို့ ရင်ခုန် လာရသည်။
Written by Hla Phone Myint Friday, 15 June 2012 11:47	It was December but the freezing nights of Rumba were nowhere close to being noticed.
Written by ရဲစွမ်းနေ	Monday, 21 May 2012 16:40	place/ pleis/ n[c] particular area or position in space occupied by sb/ sth.[c] seat or position kept for or occupied by sb.
Written by ဇွဲလွင်	Monday, 23 April 2012 14:45	ထူးအိမ်သင်က “မနက်ခင်းရဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေ ထက်ကို ပိုမွှေးတဲ့ ချစ်သမီးရဲ့ ပါးနုလေး”ဟု ပြောခဲ့သည်။
Written by Hla Phone Myint	Friday, 16 March 2012 12:30	ရေးကြည့်ပါ ကဏ္ဍဟာ ရသ စာပေကို ရေးစမ်းချင်တဲ့ ဖူးငုံ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် ပရိသတ် အတွက် ရည်ရွယ် ဖွင့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tiny Drops of Memories
We have 165 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.